अचेल पूरै शरीरको स्वास्थ्य परीक्षण (होलबडी चेकअप) गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका विभिन्न प्याकेजमध्ये ‘होलबडी चेकअप’ एउटा हो।
मानिसको समग्र स्वास्थ्य अवस्थाबारे गरिने परीक्षणलाई ‘होलबडी चेकअप’ भन्ने गरिन्छ। होलबडी चेकअप मानिसको उमेर र लिंगअनुसार फरक हुन्छ। रगत, दिसा, पिसाब र विभिन्न एक्सरेबाट होलबडी चेकअप गरिन्छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झा का अनुसार होलबडी चेकअप कुनै वैज्ञानिक नियम होइन। होलबडी चेकअपको लागि विशेष उमेर समूह तोकिएको हुँदैन। नेपालमा ४५ वर्ष नघिसकेका मानिसले होलबडी चेकअप गर्ने गरेका छन्।
रगतमा रक्त समूह (ब्लड ग्रुप), सुगर, कलेजो (लिभर फङ्सन टेस्ट), युरिक एसिड, थाइराइड (थाइराइड फङ्सन टेस्ट), हेपाटाइटिस बी, सी र एचआइभी लगायत परीक्षण गरिन्छ। यस्तै पिसाबमा संक्रमण, सुगर, प्रोटिनको मात्रा जाँच गरिन्छ भने दिसामा संक्रमण, जुका, लगायत हेरिन्छ। होलबडी चेकअपमा मुटु, कलेजो, फोक्सो, मिर्गौला र छातीको एक्सरे पनि गरिन्छ।
४० वर्ष माथिका महिलाका लागि म्यामोग्राफी र ४५ वर्षभन्दा माथिका पुरुषका लागि प्रोस्टेट (पिएसए) परीक्षण गरिन्छ। होलबडी चेकअपका लागि अस्पतालहरूले विभिन्न प्याकेज बनाएका छन्।
डा. झाका अनुसार होलबडी चेकअप भनेको टाउकोदेखि खुट्टासम्मको स्वास्थ्य परीक्षण हैन। यसमा बिरामीको आग्रह र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार परीक्षण गरिन्छ। उनी भन्छिन्, ‘सर्वसाधारणले होलबडी चेकअप भन्ने बित्तिकै शरीरको सबै परीक्षण भन्ने बुझ्छन् तर त्यो होइन। बिरामीको आग्रह र उनीहरुको आवश्यकताअनुसार चेकअप गरिन्छ।’
होलबडी चेकअपका पूर्वतयारी
निर्देशक डा. झाका अनुसार होलबडी चेकअप पूर्व चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्दछ।
स्वास्थ्य परीक्षण पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुरा :
–अघिल्लो रात कम्तीमा ८–१० घन्टा सुत्नुपर्छ।
–कम्तीमा २४ घण्टाअगाडिदेखि साधारण खाना खानुपर्छ।
–सुगर, कोलेस्ट्रोल र भिडियो एक्सरेका लागि कम्तीमा ८–१० घन्टा खाली पेट हुनुपर्छ।
–पुरानो रोग, पहिले गरेका जाँचका रिपोर्ट, आफूले सेवन गर्ने औषधिको पूर्ण जानकारी गराउनुपर्छ।
–२४ घन्टा अघिदेखि धूमपान र मद्यपान गर्नु हुँदैन। मद्यपान गरेको केही घन्टामै जाँच गरेमा सुगर कम देखिने, युरिक एसिड बढ्छ भने कलेजोको इन्जाइममा पनि गडबड आउँछ।
होलबडी प्याकेजका नाममा अस्पतालपिच्छे फरक फरक शुल्क तोकिएको पाइन्छ।
कुन अस्पतालमा कतिमा गरिन्छ होलबडी चेकअप?
नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा होलबडी स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। यो अर्धसरकारी अस्पताल हो।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पुरुषलाई १५ हजार चार सय र महिलालाई १४ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। साथै उमेरअनुसार र जँचाउनुपर्ने रोगअनुसार मूल्य फरक पर्न सक्ने अस्पतालले जनाएको छ।
काठमाडौं धापासी हाइटमा रहेको ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल पनि निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित छ। ग्रान्डीमा होलबडी स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रारम्भिक चरणमा २ हजारदेखि थप चरणमा २० हजार सम्मको प्याकेज रहेको छ। दुई हजारमा रगत र मुटु तथा मिर्गौला परीक्षण हुन्छ। २० हजारको प्याकेजमा प्रत्येक अंगको भित्री परीक्षण गरिन्छ।
ग्रान्डी सिटी अस्पताल
जमल कान्तिपथमा रहेको ग्राण्डी सिटी अस्पतालमा विभिन्न तीन प्याकेजमा होलबडी चेकअप हुन्छ। जसअन्तर्गत ३ हजारदेखि १० हजार ९ सयसम्म शुल्क तोकिएको छ।
ललितपुरको नख्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा होलबडी चेकअप गर्न ४ हजार ५ सय देखि २१ हजार १ सयसम्म लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ।
वीर अस्पताल नेपालको सबैभन्दा पुरानो र व्यस्त अस्पतालमध्येको अस्पताल हो। अस्पतालले उच्च गुणस्तरको चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका धेरै बिरामी यस अस्पतालमा निःशुल्क चिकित्सा सेवा लिन आउँछन्। वीर अस्पतालमा होलबडीको लागि कुनै प्रावधान छैन।